China DZ600/2S oluzenzekelayo umatshini wokupakisha vacuum abavelisi kunye nababoneleli |INCHOI
Lo mzekelo yimveliso esemgangathweni yenkampani, eyenziwe ngayo yonke insimbi engenasici, echasene neendawo ezinzima, ukusetyenziswa kwexesha elide, kunye nokuzinza okuphezulu.Ngoku iyeyona modeli iphambili yasekhaya.Ifanelekile inyama, iimveliso ezikhethiweyo, iimveliso zasemanzini, ukutya kwaselwandle, imifuno, kunye nemveliso yezolimo, iziqhamo ezigciniweyo, iinkozo, iimveliso zesoya, izinto zonyango, izixhobo zombane, njl.
Ukupakishwa kweVacuum kukukhupha ingxowa yokupakisha, kwaye emva koko uyitywine ukwenza inqanaba elithile le-vacuum engxoweni, ukuze izinto ezipakishweyo zifezekise injongo yokufakwa kweoksijini, ukutsha, ukufuma, ukungunda, umhlwa, inambuzane, kunye nongcoliseko. uthintelo.Yandisa ngokufanelekileyo ubomi beshelufu kwaye iququzelele ukugcinwa kunye nokuthutha.
Olu luhlu lomatshini wokupakisha uvacuum lubonakaliswa yinkqubo ngokuzenzekelayo yokutshayela, ukutywina, ukupholisa kunye nokukhupha, esetyenziselwa ukupakishwa kwevacuum yokutya, amayeza, amanzi, iikhemikhali kunye ne-elektroniki industries. Inokuthintela iimveliso kwi-oxidization kunye nokungunda, njengoko kunye nomhlwa kunye nokufuma,ukugcina umgangatho kunye nokutsha kwemveliso ngexesha elide lokugcina.inomthamo ophezulu kwaye kulula ukuyisebenzisa, isixhobo esiyimfuneko kumgca wokulungisa ukutya kunye nomnye umzi-mveliso.
Oomatshini bokupakisha be-vacuum abaveliswa yinkampani yethu banomsebenzi wokupakisha i-vacuum, efanelekileyo kwiingxowa zefilimu ezidibeneyo zeplastiki okanye i-aluminium foil composite film bags, inkukhu eyosiweyo, idada elosiweyo, inyama yenkomo kunye ne-mutton, inyama yedonki, isoseji, inyama kunye nezinye iimveliso zenyama. kunye neemveliso zasemanzini., Iimveliso zePickles, iimveliso zesoya, izongezo ezahlukahlukeneyo, igwele, ukutya, iziqhamo ezigciniweyo, iinkozo, izinto zonyango, iti, iintsimbi ezinqabileyo, iimveliso zekhemikhali, njl. ukupakishwa kwevacuum.
Umatshini wokupakisha wevacuum, kufuneka nje ucinezele isigqubuthelo sevacuum sigqityiwe emva kwevacuum, ukutywina, ukupholisa kunye nokukhupha ngokwenkqubo.
Ukupakishwa kwevacuum okanye igesi yokucoca inokuthintela i-oxidation, ukungunda kunye ne-bug yokutya i-bymoth, ukufuma, ixesha elongeziweyo lokugcina imveliso.
Umzekelo No. DZ600/2S
Ukusetyenziswa kwamandla okuphakathi 2.2kw
Ubungakanani begumbi levacuum 700*610*130mm
Ukutywina ubungakanani obusebenzayo 600*10mm/2ingceba
Inombolo yesifudumezi 2*2
Isantya sokupakisha 120-200 amaxesha / iyure
Isithuba somgca wokutywina 490mm
ukupompa ixesha 1-99s
Ixesha lokutywinwa kobushushu 0~9.9s
idigri yevacuum ≤200pa
HAYI. Igama Izinto eziphathekayo Uphawu Amagqabantshintshi
1 igumbi eliphezulu 4mm SUS304 INCHOI amandla aphezulu, athembekileyo
2 phantsi iqonga lokusebenza 4mmSUS304 INCHOI indibano ye weld
3 ipleyiti yangasemva SUS304 INCHOI
4 umzimba ongundoqo SUS304 INCHOI
5 i-axi eyintloko SUS304 INCHOI
6 intonga yokudibanisa ukubumba SUS304 INCHOI
7 ethwele isiseko ukubumba SUS304 INCHOI
HAYI. igama ubungakanani uphawu izimvo
1 impompo yokufunxa 2 NAN TONG 20m³/h
2 isitshintshi 2 XINYUAN
3 umnxibelelanisi 2 CHNT
4 Thermal overload umkhuseli 1 CHNT
5 ixesha relay 3 CHNT
Ngaphambili: I-DZ600 / 2S i-tilt adjustable Vacuum umatshini wokupakisha
Okulandelayo: I-DZ-1000 umatshini wokupakisha we-vacuum oqhubekayo
Owona matshini wokuPakisha uVacuum
Umatshini wokuPakisha uVacuum wokuThweba
Umatshini wokuPakisha uVacuum oqhubekayo
Umatshini wokuPakisha we-Dz 500
Umatshini wokuPakisha we-Dz 600
I-DZ600 / 2S i-tilt adjustable Vacuum umatshini wokupakisha
DLZ-420/520 Computer oluzenzekelayo oluqhubekayo stret ...
Umatshini wokupakisha we-skin vacuum
Ukupakishwa kwevacuum ezenzekelayo ejikelezayo...